အခဈြကမ်ဘာဝယျ အနှဈတှရှောမယျ – My Blog
အခဈြကမ်ဘာဝယျ အနှဈတှရှောမယျ (စ/ဆုံး)
နီလာရေ…နီလာ……. ဝေ့..နီလာ…အသံခပျကယျြကယျြလေး..ကွားလိုကျရမှ.. နီလာတြောကျ…အတှေးနယျခြဲ့နရောမှ… အသိလေးဝငျလာခဲ့တော့သညျ…….. ဟုတျ..ကိုကွီးစိုးမိုး…ဘာမှာမလို့လဲ… နငျ့မလဲ…ဘာတေ.ငေးပီးဆှေးနလေဲ.. မသိတော့ပါဘူး..ချေါမကွား..အျောမကွားနဲ့….. ငါ.လဖကျသုတျ.တပှဲပေးဟာ. .ရနှေေးကွမျးလေးပါပေးဦး..ဒီဟာတကေ..အေးနပေီ… ဟဲ့ဟဲ့..ခဉျြငံစပျလေးနျော….သခြောလဲလုပျပေးဦး.. .တှေးရငျးငေးရငျးနဲ့..သုပျလို့..ငါစားမရဖဈနပေါဦးမယျ. ဟား…ဟား…ဟား… အာ…ကိုကွီးစိုးမိုး.. ကလဲ..အဲ့လိုလဲမဟုတျပါဘူး..၃မိနဈစောငျ့..ရှယျသုပျပေးမယျ..ပုဇှနျခွောကျလေးပါမြားမြားထညျ့ပေးမယျ။
အဲ့ဒါကွောငျးလဲ..နငျ့ဆီပဲ..လာလာဆှဲနရေတာပေါ့ဟယျ…..ဟုတျပါတယျ….နီလာ..ဆိုတာ..ကမြလေ… အသားခပျညိုညိုနဲ့..အရပျအမောငျး.. အလယျအလတျလောကျနဲ့..မွငျသူ…ပွနျလှညျ့ကွညျ့ရလောကျစတေဲ့. ဘောဒီ..နဲ့..ရငျသားခပျမို့မို့နဲ့..တငျသားခပျတငျးတငျးတကေိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့ကမြ……ယောကြားရှိပမေဲ့….. ဗိုကျခေါကျလေးနညျးနညျးထှကျနတောကလှဲလို့.. .မွငျသူလိုးခငျြစရာ….ဘောဒီ. မြိုးကိုပိုငျဆိုငျထားတာကတော့..ဘုရားပေးတဲ့ဆုလာဘျပါပဲ..ကမြ.ယောကြားက….. ထှနျးဇျော..အရမျးရိုးတယျ.. ကမြထကျ..၂နှဈကွီးတယျ..အသကျက..၂၆..ကမြ..က.၂၄….ညားတာကတော့..၃နှဈလောကျရှိပီ.. သားသမီးတော့မယူဖဈသေးဘူး….သူက..ဆိုငျကယျ..တကျဆီ .ဆှဲတယျ..ကမြကတော့.. လကျဖုတျသုတျဆိုငျလေးမှာ… အအေး..ကှမျး..ရသေနျ့..ဆိုငျသေးသေးလေးပေါ့.. တကျဆီ .သမားတေ..ဂိတျထိုးတဲ့နရောလေးဘေးမှာပေါ့…အရောငျးအဝယျလေးလဲ.မဆိုးဘူးပေါ့။
တနေ့..ကမြ.ဘဝကို.တဈဆဈခြိုးပွောငျးလဲစတောကတော့…ကိုကိုကြျော…ဆိုတဲ့….ကမြရဲ့..ခဈြလငျငယျပေါ့…. .ပွနျတှေးတိုငျး..ရငျခုနျသံတေ..ဆူညံမွနျဆနျစတေဲ့သူ… ကမြရဲ့..နှလုံးသားကို..စှဲကိုငျလုပျနိူငျစှမျးရှိတဲ့သူ…ကမြရဲ့..ဆန်ဒတေ..ပွညျ့ပွညျ့၀၀ ပေးစှမျးနိုငျတဲ့သူ…ကမြ..သူ့ကို..အရမျးခဈြတယျ…အရမျးခဈြတယျ..ကိုကိုကြျော……. ကြျောကွီး..တြောကျ….တကျဆီ .ပို့ပီးရာမှာ..ထိုးနကွေဂိတျသို့..ပွနျရောကျလာပီး……ကားတံခါးလေးဖှငျ့၍. .ဆေးလိပျတလိပျအားမာနျပါပါဖငျ့ဖှာရှိုကျရငျး… ဖုနျးလေးထုတျခါ.. ဟိုကွညျ့ဒီကွညျ့ဖငျ့..ဆေးလိပျတထိပျ..ကုနျသညျအထိ..သောကျလိုကျပါတော့သညျ….. အပွငျးပွသေုံးရနျ..ဖှငျ့ထားသော..ဆကျဈ အကောငျ့ လေးအား. စတငျ၍..ကြျောကွီးတြောကျ..နှာကြောတငျးတော့မညျ။
ကနြေျာ့..နာမညျ…ကြျောကြျောဦး…အသကျကတော့..အိုဗာ..ဗြ..၄၅.ရှိပီ ..အလုပျကိုငျကတော့.. တကျဆီ ..ဆှဲတယျ…မိနျးမလား..ရှိတယျ…ကလေး..၃ယောကျ..နဲ့ …… အိမျထောငျသကျကွာလာတော့…မိနျးမကို..ဘုခငျြစိတျက…အားမရ.. .ရောဂါသညျဆိုတော့.. ဆီးခြို.သှေးတိုးကရှိသေး…အဲ့လိုအဲ့လိုနဲ့ပေါ့…… ထားပါတော့.. ကနြျော.သုံးနတေဲ့..ဆကျဈ အကောငျ့ ထဲမှာ..ဆျောလေးတနေဲ့ အကွူ ဇယားလေးတေ..ခငျးထားတာတရှေိတယျ။
ဒါကတော့..စိတျပွလေကျပြောကျ..အာသာပွပေေါ့.. အဆငျပွရေငျ..ဗီဒရိုကော လေးနဲ့..သူဘကျကလဲပှတျ…ကိုယျဘကျကလဲ.ဂှငျးထုပွပေါ့…အဆငျကိုပွလေို့ . ဒါနဲ့..မနညေ့က..နီနီ .ဆိုတဲ့.. ဆျောလေးတပှေ..ကို..အပျ လိုကျတယျ…သူလကျခံထားတာကို.. မသိဘူး..ကနြျောလဲ.နလေ့ညျက.နညျးနညျး.ပနျးထားတော့. အိပျပြျောသှားတယျ…ခုမှ.သိရတာ… အဲ့လဲ့….သူလိုငျးပျေါရှိတယျ… အခြိနျရှိခိုကျ.လုံးလလေးစိုကျလိုကျဦးမှ…. ဟိုငျး….. (ဟိုငျး..ပါရှငျ့) ဟုတျကဲ့..ခငျခငျြလို့ပါ..ဗြ (ဟုတျ.ရတာပေါ့..ရလို့..ညကတညျးက.လကျခံထားတယျလေ..အပိုတကေ. ) ဟုတျကဲ့ပါ..ကြေးဇူး.. ဒါနဲ့..ဘာတလေုပျ (အလုပျ.လုပျနပေါတယျရှငျ့) စပျစုတယျမထငျနဲ့..ဘာအလုပျလဲကှယျ (နီလာက..ဈေးရောငျးပါတယျ..ခုဈေးဆိုငျမှာပဲလေ) ဟုတျလား..ဘယျမှာနေ. (…မှာပါရှငျ့) ဟုတျလား.ဘယျလမျး.မှာလဲ.. (..တကျဆီ ဂိတျနားလေးမှာပါရှငျ့) ဟုတျလား..အဲ့ဂိတျကို..လာနကွေမဟုတော့.မသိဘူး..ရောကျတော့ရောကျဖဈတယျ.အမှတျတမဲ့နဲ့မို့… လာလညျခဲ့မယျလေ… (ရပါတယျ..ရှငျ့.)
နာမညျက..နီလာတဲ့လား.. အသကျကရော (ဟုတျကဲ့..နီလာဝငျး.ပါရှငျ့ အသကျက.၂၄…အကိုကရော) ကြျောကြျောဦး..ကြျောကွီးလို့ပဲချေါကွတာမြားပါတယျ..အသကျကတော့..ကွီးပီ… ၄၀.. (ဟုတျလား…ခဏနျော..ဈေးဝယျသူလာလို့..နောကျပွနျဆုံမယျလေ.)… ဟုတျကဲ့ပါဗြ….. ..နီးနီးလေးပဲ…သှားကွညျ့လိုကျဦးမှပဲ… တကျဆီ ..အားလား.ဆရာကွီး…..ဟိုကျ…ဒုက်ခပဲ… အားပါတယျဗြ..ဘယျသှားမလို့လဲ…တငျတကျ..ကားပျေါ.. ကားတံခါးအားဆငျးဖှငျ့ပေးလိုကျရတာပေါ့….(…..သှားခငျြလို့ဗြာ..)ရပါတယျ..မွို့ပွငျဆိုတော့…(….လောကျတော့ပေးဗြာ..နော့…) နညျးနညျးလောကျလြော့ပါဦးဗြာ….၅၀၀ တော့လြော့ပေးမယျဗြာ.. အမြားကွီးလဲမဆဈပါနဲ့နျော.. ကုနျဈေးနှူနျးကလဲကွီး..ဆီဈေးကလဲတကျနဲ့မို့ပါ။
အိုကေ ..ပါဗြ..သှားကွတာပေါ့….. နီလာ..တြောကျ…ညနစေောငျးလို့.ဆိုငျလေးသိမျးပီး.. .ပွနျဖို့..လငျတျောမောငျ..ထှနျးဇျောကို..စောငျ့နရေငျး… လိုငျးလေးဖှငျ့ပီးသုံးနတေော့သညျ…. နခေ့ငျးက..စကားပွောခဲ့သော..ကိုကြျောကွီးဆိုသူ.. ဝေါ ထဲဝငျကွညျ့မိရာ..အောစာမြား..ရှယျထားတာတှေ.. ကို..တှမေိ့၍…စောငျ့ရငျးဖတျလိုကျမိတော့သညျ… အိုး…အရမျးကောငျးတာပဲ….. ဖတျရငျးနဲ့ငါစိတျတတေောငျ..ဘယျလိုတဖေဈနလေဲ.မသိတော့ဘူး. .ပေါငျကွားလဲ.ယားစိစိ.ဖဈလာတယျ….. .စိတျဆန်ဒပွညျ့ပွညျ့၀၀မရတာကလဲ.ကွာပါပီ… ငထှနျးက..ထငျသလောကျမဟုတျ… ထမိနျလှနျတငျ..တကျလိုးပီး.. ၅မိနဈလောကျဆိုပီးရော..လီးကလဲသေးသေးလေး.. ၄လကျမခှဲလောကျ….ခုလဲ.စာဖတျရငျး..စိတျက.ထလာပီ.. .တျောပီ ..တျောပီ ..ညမှပဲဆကျဖတျတော့မယျ.. လိုငျးလေးပီတျပီး..ထမီလေးပွနျပွငျဝတျရသညျ။
ဖီး လာပီး.အရညျစိမျ့ထှကျလာတာ…တျောသေးတယျ..အမဲရောငျ.ဖိစကတျလေးဝတျခဲ့မိလို့.. .ပွောရဦးမယျ..နီလာက..ထမီသိပျဝတျလဝေ့တျထမရှိဘူး..ဖိစကတျလေးတပေဲဝတျတာမြားတယျ… ဒီနမှေ့..ဝတျစရာတမေီးပုမတိုကျရသေးလို့..ထမီဝတျလာခဲ့တာ…တျောသေးလို့……. ဟော..လငျတျောမောငျ..ဆိုငျကယျရောကျလာပါပီ .. စောငျ့နတောကွာပီလား..မိနျးမ…(အငျး..နာရီဝကျလောကျရှိပီ.ကိုထှနျး…)..အငျး..ပွနျကွတာပေါ့… ကြျောကွီး…နီလာဆိုငျ..မသှားဖဈလိုကျ၍..အိမျသို့သာ..ပွနျခဲ့လိုကျတော့သညျ။
မိနျးမ.ရေ…မိနျးမ.. ဝေ့..ငါအိမျထဲ၇ှိတယျ..ဘာလို့ဒီလောကျ.အျောနရေလဲ.. တကတညျးထှကျပွေးမဲ့သူကွနတောပဲ .အျောကွီးဟဈကယျြနဲ့..ရမေိုးခြိုးတော့..ထမငျးစားမယျ အိမျရောကျ၍.ရမေိုးခြိုး..ထမငျးစားပီး..အသီးသီး..အိပျ ယာဝငျကွတာပေါ့… ငထှနျးတို့တော့.ဟောကျနပေီ ..အိပျ ရငျလဲ..သနေတေဲ့အတိုငျးပဲ.ဆငျအျောတောငျ.မနိူးဘူး….. ကမြ..ကို..လိုးပေးရကောငျးမှနျးလဲ.မသိဘူး.. ဒီမှာတော့..လိုးခံခငျြနတော..သူကတော့မသိရှာ…. လိုငျးသုံးတာပဲ..ကောငျးပါတယျ….. ထမငျးစားပီ ၍..ဆေးလိပျလေးသောကျရငျး..မိနျးမ.ကိုကွညျ့လိုကျရာ.. အိပျ နပေါပီ…ကလေးတလေဲ..သူ့အခနျးနဲ့သူ..အိပျ ကွပီ ..နာရီကွညျ့တော့.. ၉.နာရီခှဲနပေီ…နီလာ့ကို..သတိရ၍..စာပို့ရနျ..အားသှငျးထားသော..ဖုနျးဆီသို့..အာရုံပွောငျးလိုကျတော့သညျ။
ဟိုငျး…နီလေး ရှငျ..ကိုကြျော… မအိပျ သေးဘူးလား..နီလေး ဟုတျ..မအိပျ ခငျြသေးလို့..ဟို့ကညျ့ဒီကွညျ့နဲ့.. ကိုကြျောရော.မအိပျ သေးဘူးလား အငျး .ခုမှတကျခဲ့တာ..မအိပျ သေးဘူး….နီလေး ဟုတျ..ပငျြးတာနဲ့…ဟိုကွညျ့ဒီကွညျ့လုပျနတော. အာ့ဆို.စကားပွောမယျလေ..ရလား.. ခဏ.ကိုကြျော..ဘေးမှာ..အမြိုးသားရှိတယျ.. အိမျထောငျနဲ့လား..နီလေးက.. အငျး ..ဟုတျတယျ.ကိုကြျော…ဘာလဲ.. အိမျထောငျနဲ့ဆိုလို့..စကားမပွောခငျြတော့လို့လား.ရပါတယျနျော. အာမဟုတျပါဘူး…အိမျထောငျနဲ့ဆိုတော့လဲ.. ပိုကောငျးတာပေါ့. ဟီးဟီး…. ကိုကြျောနျော…ဘာပိုကောငျးတာလဲ…. မဟုတျပါဘူး..ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးစကားပွောလို့ရတာပေါ့… အဲ့ဒါပွောတာ… အငျး ..ကိုကြျောလဲ.အိမျထောငျရှိလား.. ကိုကြျော..မညာပါဘူး..ရှိတယျ.. ဒါမဲ့..ငတျနတော.ကွာပါပီ.နီလေးရယျ…အားမပါဘူး.. မိနျးမက..ရောဂါသညျ.ဆိုတော့..အမောလဲ.မခံနိူငျ… .ဘေးစောငျးလေး..ကပျတှနျးလေးတှနျးနရေတာ.. နီလဲ..အမှနျတိုငျးပွောရရငျ… သနျတုနျးမွနျတုနျး..ကို.ရထားပမေဲ့…အမြိုးသားက..၇ ရကျတခါလောကျမှသာ…. ဆန်ဒမပွညျ့ပါဘူး..ကိုကြျော.. နီလေး..ကိုကြျော.ပုံပို့လိုကျမယျနျော။
နီလေးလဲ..ကိုကြျောပို့သလိုပို့ပေးမလား ဟုတျ.ကိုကြျော.. အဲ့မှာ.ပို့လိုကျပီတှလေ့ား… တှတေ့ယျ.ကိုကြျော..မထငျရဘူးနျော…၄၅.. အရမျးနုတယျ..မသိရငျ.၃၅.လောကျပဲထငျရတယျ.. နီလေး.ပို့ပေးလေ.မွငျခငျြလှပီ .နီလေးကို တှလေ့ား.ကိုကြျော… နီလေးရေ..ကိုကြျောတော့ကွှပေီ ကှာ… ခဈြစရာလေး..နီလေးက…အရမျးလှတယျ…. မွှောကျပွောနပွေနျပါပီ..ဘာစားခငျြလို့လဲ..ဝယျကွေှ့းပါမယျနျော… တကယျကွေှ့းမှာလား.. တကယျပွောတာ..ပွော နီလေးကိုပဲစားခငျြတာ.. တှလေ့ား..နီလေးပုံမွငျပီး..ကိုကြေျာ့..ညီလေး..တငျးလာပီ.. လီးပုံအား..နီလေးထံသို့ရိုကျ၍.ပို့ပေးလိုကျသညျ။
နီလေး..ပုံကိုမွငျ၍..စပတေ..ယားသှားတော့သညျ…ဒါကွီးနဲ့သာ.ခံရရငျတော့.. အရှငျလတျလတျ.နတျပွညျသို့ရောကျသှားနိူငျသညျ….. ၈လကျမလောကျရှညျပီး… ကြှဲစိမျး.ပုလငျးလုံးလောကျရှိလသေညျ… အာ…ကိုကြျော..ဘာတပေို့နတောလဲ..ရှကျစရာကွီး. နီလေး..ပုံပို့ပေးလေ.. ကလောငျ…..ပို့ပါပီ မွငျလိုကျရတော့..ပို့၍လီးက.တောငျသှားတော့သညျ… မုနျ့ဖောငျးလေးလိုပဲ..ဖောငျးတငျးနရေော. .နှူတျခမျးသားလေးတေ.. နဲ့နဲ့ညိုနတောက.လှဲလို့..ပဈရကျစရာမရှိ….. ကုနျးမှုတျခငျြစရာ..ကောငျးအောငျ..လှသညျ… လိုးခငျြစိတျတေ.ဆိုတာ..ထိနျးမရ… ပုံကွညျ့၍..ဂှငျးထုနမေိတော့သညျ. နီလေး..ကိုယျတို့.အပွငျမှာ..ဆုံကွမလား.. နီက.ဆိုငျတဖကျနဲ့ဆိုတော့..အားမှာမဟုတျဘူး..ကိုကြျောရဲ့.. ဒါဆို..ဂိတျလာထိုးမယျ..နီ.တို့.ဆိုငျဘေးမှာ.. အငျး .ရတယျလေ.. နီ ဖုနျးနံပာတျ ပေးပါလား. ဟုတျ… ၀၉…. ၀၉…..အဲ့ဒါ.ကိုကြေျာ့.ဖုနျး.. ဟုတျ…ကိုကြျော..နီလေး..အိပျ တော့မယျ..မနကျလဲအစောကွီးထရဦးမှာမို့…. ကောငျးပါပီ ..နီ..အရမျးတေ ခဈြမိနပေီ ..မနကျတှမေ့ယျနျော.. ဟုတျ..ကိုကြျော..မဆိုးနဲ့နျော..တှရေ့ငျ..ခိခိ…. အငျး .ပါ..နီ..ဂှတျနိုကျ။
ကြျောကွီး..ဝမျးသာမှူတမြေားစှာနဲ့..အိပျစကျအနားယူရငျး.မနကျအတှကျ..ရငျတခေုနျ..နရေပါတော့တယျ နံနကျစောစော…မှာ..ဆိုငျခငျးရငျးနဲ့..အလုပျနညျးနညျးရှူပျနခြေိနျ…ဖုနျး.သံလေးကွားလိုကျရ၍.. ယူကွညျ့မိလိုကျရာ…… ကိုကြျောကွီး..ပါလား… ဟယျလို နီ..ကိုကြျော..ပါ..နီတို့ဂိတျနားကို.လာနတော.. ဟုတျကိုကြျော..ဘာစားပွီးပီလဲ..ဆိုငျကိုလာခဲ့..လကျ ဖကျရညျတိုကျမယျ…. လကျဖကျရညျပဲလား မုနျ့ပါ.သေးတယျ… ခိခိ.. ဒါနဲ့ပွောရဦးမယျ..နခေ့ငျးသှားစရာရှိတယျ.. အဲ့ဒါ..ကိုကြျော.ကားနဲ့သှားမယျလေ..ရမလား… တကယျလား..ရတာပေါ့..နီနဲ့ဆို.. နတျပွညျလဲသှားနိူငျသလို..ငရဲကိုလဲသှားရဲတယျ.. ဟုတျကိုကြျော..လာခဲ့လနေျော. ကိုကြျော…မြှျောနမေိတဲ့ကမြ…ညကတညျးက..စိတျတှကေ..ယိုငျခငျြခငျြ…နလေ့ညျကွ.. ကိုကြျောနဲ့အပွငျသှားရတော့မယျဆိုတော့.. ဘာတှဆေကျဖဈမလဲ…. စိတျထဲ..တှေးရငျး..စောကျရညျတောငျ.နညျးနညျးစိမျ့လို့လာတယျ။
ကြျောကွီး..ရေ..တကျဆီ ..အားလားကှ…. ရတယျလေ..အကို..ဘယျသှားမလို့လဲ…. အေးကှာ..ငါကိစ်စလေးရှိလို့ဟ.(….)ကိုသှားမလို့…. ရတယျလေ..အကို..တကျ..သှားကွတာပေါ့… ကြျောကွီး..တြောကျတော့..လကျကီးဒေးး .ပဲ.ဒီနကေ့တော့…မနကျကတညျးက..ရလိုကျတဲ့. လမျးကွောငျးတေ…ခုလဲ..၁၂နာရီ.ကြျောနပေီ.. ခုထိနီလေးဆိုငျဆီမရောကျသေး.. ခြိနျးထားတာက.. ၁နာရီ…မှီကောငျးမယျ..ထငျပါရဲ့..ကားတမေကပျြပါစနေဲ့ပဲ..ဆုတောငျးနရေတာ. .ကြျောကွီးတြောကျ..ရငျထဲမှနျးကပျြလို့..လပေူတကျေုမှူတျထုပျရငျး..ကားလေးကို..မောငျးနှငျလာရာ…… ငါ့ကောငျကြျောကွီး..ဘာတေ..စဉျးစားပီး..သကျပွငျးကွီးပဲခနြတေော့တယျ…
သီခငျြးဖှငျ့ကှာ……ငါပငျြးတယျဟ…. ဟုတျ..အကို..ဘာရယျမဟုတျပါဘူး.. ဟိုစဉျးစား.ဒီစဉျးစားနဲ့ပါ…ဒါနဲ့.ဘာသီခငျြးနားထောငျမလဲ….. စိုငျးထီးဆိုငျ..ပဲဖှငျ့ကှာ…အေးအေးလေးနဲ့ပေါ့…. ဟုတျအကို…ရတယျ..ကနြျောလဲ..အရမျးကွိုကျ… ထီးဆိုငျ.ကွီးကို…. ပွောပွောဆိုဆိုနဲ့..ဖုနျး .လေးထုတျ..ဘလူးတူ..လေး.ခြိတျပီး.. ခဈြသူလမျးကွားလေးကနေ..စလိုကျတာ… သံစဉျနောကျမြောပါရငျး.. .ကြျောကွီးရဲ့..အတှေးထဲ..နီလေးရဲ့..ပုံရိပျတေ..စိုးမိုးလို့လာပါတော့တယျ။
မမနီလာ…ဘယျသူ့မြှျောနတောလဲ…. မေးသံအကွား..သူခိုးလူမိသလို..မလုံမလဲနဲ့…… အျော..မဟုတျပါဘူး..ငါဒီနအေ့ပွငျကိစ်စလေးရှိလို့..အဲ့ဒါ…သှားရငျကောငျးမလား..စဉျးစားနတော… ဂိတျမှာလဲ..ကားတကေမရှိတော့… .စောငျ့နတော….. ဝူး…..သကျပွငျးလေး.ခိုးခရြပွနျပီ .. ကြှီ….ကားလေးရပျလာပါပီ…. ဘယျသူပါလိမျ့…မှနျတံခါးလေး..ကလြာတော့…..ဟောတော့..ကိုယျတျောခြော. .ရောကျလို့လာပါပီ…ကိုကိုကြျော…. ညီမလေး..မမ..အပွငျခဏသှားဦးမယျနျော..ဆိုငျခဏကွညျ့ထားပေးဦး… ဟုတျ..မမနီလာ…. အေး..အေး..သှားမယျနျော… .လကျစှဲအိတျလေးယူရငျး…. ကားဆီသို့..လှမျးလာနသေော… ကမြ..ကို..ဝါးစားမတကျကွညျ့နတေဲ့..ကိုကိုကြျောရဲ့.. အကွညျ့တကေ.. ကမြရဲ့…နှလုံးသား.ထဲ..အအေးလိုငျးဖွတျသှားသလို…အေးစကျ..သှားရတယျ။
ကားလေးတရိပျရိပျနဲ့..မောငျးနစေဉျ…တိတျဆိတျမှု့ကို..ဖွိုခှငျးခဲ့တာ..ကိုကိုကြျော…. နီလေး…ဘယျသှားမလဲ….. ကမြ…လနျ့သှားရပါတယျ…အပွငျက.အသံက.. ပို၍..တညျကွညျပွတျသားလှပါတယျ…. ကိုကိုကြျော..ဘယျသှားခငျြလဲ….. အေးအေးဆေးဆေးစကားပွောရအောငျ.. ပနျးခွံပဲ..သှားလိုကျမယျလေ..မကောငျးဘူးလား… ဟုတျ.ကိုကိုကြျော….. ပနျးခွံထဲ..ဝငျ၍…ကားပါကငျ..တှငျ..ကားအပျ.. လတျမှတျလေးကိုယျစီဖငျ့..ဝငျလာခဲ့ရာ..လမျးတလြှောကျ….. အတှဲလေးတှေ..ကိုယျစီ.. ထီးလေးကိုယျစီဖငျ့… အလုပျဖဈ၍နကွေရာဝယျ………. ကိုကိုကြျောကဖွငျ့..ပွုံးစိစိ…. နီလေး…ဘာစားပီ ပီ လဲ… မစားခငျြသေးဘူးကိုကြျော…ရငျကယျနလေို့… စကားတေ..ဟိုပွော.ဒီပွောဖငျ့…. .ပွောနကွေရငျး..လကျလေးအရငျ.လာကိုငျတာက..ကိုကြျော… ကမြ..ရငျထဲ..ကုလားဘုရားပှဲ..လှညျ့သလို..ဆူညံလို့နပေါပီ။
လကျဖြားတအေေးစကျလို့..အပြိုလေးသဖှယျ..ရှ ကျသှေးတကွှေယျလို့. .ခေါငျးလေးကို.ငုံ့၍..ဟနျဆောငျ..ရုနျးလေးရုနျးနရေသညျမှာ..လဲ..ပငျပနျးလှပီ….ညကမွငျထားရသညျ့… ကိုကိုကြေျာ့..လီးကွီးကို…မွငျယောငျတမျးတရငျး…ခံခငျြမိတဲ့..စိတျတကေလဲ..တားမရ..စီးမနိူငျ….. ကိုကိုကြျော..တဆငျ့..တကျလာပါပီ…ကမြရဲ့..နို့တေ..ကို..ညှဈ..နပေါပီ….ကမြလေ…မနနေိူငျတော့ဘူး…… ကိုကိုကြျော….အား….အ…..နီ.မရတော့ဘူး..မနနေိူငျတော့ဘူးကှာ.. အဲ့လိုကွီး..မကွမျးပါနဲ့..တခွားသူတေ..မွငျကုနျပါဦးမယျ…… မွငျမွငျ..နီလေးရယျ… ကိုကြျော..နီလေးကို..ဆန်ဒတဖွေညျ့ဆညျးပေးခငျြနပေီ..ဒီမှာကိုငျကွညျ့ဦး…. ပွောပွောဆိုဆိုဖွငျ့..ကမြ.လကျကိုကိုငျ၍..သူ့၏.. ၈လကျမ.လောကျရှိတဲ့လီးကွီးပျေါကိုနရောပေးလိုကျပါတော့တယျ။
အမလေး….. ဟနျဆောငျပနျဆောငျလေးနဲ့..လနျ့ပွလိုကျပါတယျ… ဒါကို..ကိုကိုကြျောက..အသဲယားပီး…ကမြနူတျခမျးကို..ဖကျနမျးပါတော့တယျ….. နို့တလေဲ..ညှဈ…ကမြ..အရမျးကို.သာယာနပေီ.. ခံမနိူငျတော့ဘူး..အလိုးခံခငျြနပေါပီ……. ..ကိုကိုကြျော..နမျးနရောမှ..ရုတျတရကျ…ကမြ.လညျဂုတျကို..ဆှဲကိုငျပီး..သူ့ရဲ့.လီးကွီးဆီသို့… ပါးစပျနရောပေးလိုကျပါတော့တယျ… ကမြလဲ.အိမျထောငျသညျပဲလေ..သိတာပေါ့…. အား….ကောငျးလိုကျတာ..နီလေးရယျ… ဘယျလိုတတေောငျ…ကြှမျးနတောလဲ……. အား…..အရမျးကောငျးတယျ..နီလေး… ကိုကြျောမှာသာ..အရမျးကောငျးပီ ..နတျပွညျရောကျနတော.. ကမြ..မှာတော့…၈လကျမလောကျအရှညျနဲ့ ကြှဲစိမျးပုလငျးလောကျအလုံးကို… မဆံ့မပွဲ..စုပျပေးနရေတာ… ကသိကအောငျ့ဖဈပမေဲ့..ပေါငျကွားက..စပလေးကတော့..အဲ့ဒီလီးဝငျတာခံခငျြနမေိပီ။
ရုတျတရကျ..ဆှဲဆောငျ့ပီး..ပါးစပျထဲက..လီးကို.ဆှဲထုတျပီး…. ကိုယျကို.တပတျဆှဲလှညျ့လိုကျပီး..ခါးကနေ.ဆှဲကိုငျ၍..ဖိစကတျ.လေးကို.. မတငျ..ပငျတီလေးကို.ဆှဲခြှတျ..အ…..အ… အျောခြိနျတောငျမရလိုကျ..တားခြိနျမရလိုကျ…. .သားအိမျလာထောကျနတေဲ့….ကိုကြျောရဲ့လီးက…. ကမြစောကျဖုတျထဲ.. .နရောယူလို့..ပွညျ့ပွညျ့ကပျြကပျြ..နဲ့…လညျပငျးထဲ..ငှကျပြောသီး နငျနသေလို..တဈစို့စိုနဲ့ရှငျ…….အရမျးကောငျးတယျ……အား…အား..ကိုကိုကြျော…… ခါးကနေ..ကိုငျပီး..အခကျြ၅၀လောကျမရပျမနား..လိုးဆောငျ့ပဈပီး….ဆှဲ..ထုပျ…ပီး….. ကိုကြျော..ပွောလာသညျမှာက…. နီလေး…ကိုကြျောတို့..တညျးခိုခနျးသှားကွမလား.. ဒီမှာက.မလှပျလပျဘူး….နျော….တဲ့ ခေါငျးလေး.ငုံ့၍…တလုံးတညျးအဖွပေေးလိုကျပါတယျ….. (အငျး) ပနျးခွံထဲက..ကားလေးမောငျးထှကျလာပီး.. အနီးဆုံး..တညျးခိုဆောငျ.. သို့…မောငျနှငျလာပီး…အခနျး..ယူ..အခြိနျ…၅နာရီယူ…. အခနျးသို့..ဝငျလာခဲ့လိုကျပါတော့တယျ။
အခနျးထဲသို့..ရောကျတယျ..ဆိုရငျပဲ…… ကမြ..ကို..ဆှဲ.လှဲပီး..အဝတျမစားတေ..ဆှဲဖွဲပဈပါတော့တယျ… ကမြကွောကျရမလား..ထှကျပဲပွေးရမလား..တောငျးပနျရမလား…ခြှေးတပေငျစီးးကလြာပီး…. ဘာလုပျရမှနျးမသိ….ခကျတာက…အဲ့လို.. ခပျကွမျးကွမျးအပွုအမူတကေိုပဲ… ကမြ..နှဈသကျသလို..ခံစားနရေပါတယျ…ဟုတျပါတယျ…စပ..ထဲက.. အရညျတပေငျ..တျောတျော.စိုနပေီလေ…သူ့ကိုတော့..ညာလို့မရဘူးဆိုတာ..မိနျးကလေးတိုငျး..သိပါတယျနော့…. ပါးစပျက..ဘယျလောကျငွငျးငွငျး…စပ.လေးထဲက.စီးကလြာတဲ့..စောကျရညျတကေ..သကျသပေဲလေ……. ဘာပဲဖဈဖဈ..လိုးလာမဲ့..လီးကိုပဲ..မှျောလငျ့နရေတယျ…ကမြ..အရမျးအလိုးခံခငျြနပေါပီ……. ကိုကြျော….ဖွဲပဈလိုကျလို့အဝတျစားတလေဲ…ရစရာမရှိတော့….. ကိုယျပျေါမှာလဲ..မိမှေးအတိုငျး..ဘာဆို.ဘာမှမရှိတော့။
ဒါကို..ကိုကြျောက..ကွညျ့၍…… စိနျတုံးတတုံးကို..လိုခငျြတကျမကျသော..အကွညျ့မြိုးဖငျ့.. ကမြ..စပ..လေးကို.စားမတကျဝါးမတကျကွညျ့ပီး… သူ့အဝတျစားတကေို..ဆှဲခြှတျလိုကျပီး… ၈လကျမလောကျရှိတဲ့.. လီးကွီးက..အပွငျသို့….ထှကျလာပီး..ခြိနျသီးသဖှယျ.. ဟိုရမျး.ဒီရမျးနဲ့..အသညျးယားစရာ….. ကိုကြျော….ကမြ.ပေါငျကွားထဲ..နရော.ယူလိုကျပီ.. .စောကျရညျတေ.ရှဲနတေဲ့..စပကွီး..တပွငျလုံးကို.. လြှာကွီးဖငျ့..ယကျခလြိုကျ..သညျမှာ.. အသညျးအေးစရာ…စောကျစိလဲ..တောငျပီး..တငျးသှားပီ….ဒါကို..သိတဲ့..ကိုကြျောက… တငျးနတေဲ့စောကျစိကို.ဆှဲစုပျလိုကျပိး..ပါးစပျထဲ..ငုံ.ထားလိုကျသညျ။
ဒါနဲ့မရပျသေး…ငုံထားတဲ့စောကျစိလေးကို….အထဲမှာ လြှာဖြားလေးနဲ့..ကလိပေးနတောလေ.. ကမြဖငျ့…အရာရာ.အားလုံးကိုမပေီ့း.. .လဟောနယျထဲရောကျနသေလို…… ကိုကြျောခေါငျးကွီးကို..ဆှဲဆှဲဖိထားပီး.. ကွားလသှေေးမှာကိုပငျ..မခံနိူငျ……. ဒါကို.သိနသေော..ကိုကိုကြျောကလဲ…စပ..တပွငျလုံးအားနရောမလပျ.. တာဝနျယူ…ယကျလိုကျ..အစိဆှဲစုပျလိုကျ…. ထှကျကလြာတဲ့စောကျရညျတကေိုလဲ…. လိုကျယကျ……တခကျြ..တခကျြ..စအိုဝကိုပါ.. လြှာဖြားနဲ့..လှမျးလှမျးထိုးကလျော..ပေးရငျ… အသညျးကို..လာလာခလုတျတိုကျသလိုပါပဲလား…..
မှုတျနရောမှ..ရပျ၍…ကိုကြျော. .တြောကျ..သူ့လီးကွီးကို..ကိုငျ၍…နီလေး၏…စပ.ဝဆီသို့…တအေ့ပွီး.. .ပေါငျ၂ခြောငျးကို.. ဟိုဘကျဒီဘကျကိုငျကာ… အားကုနျ..ဆောငျ့လိုးလိုကျရာ……အား…အား……အား……အငျး……ဗဈြ..အီးးရှီးး အမလေး ကောငျးလိုကျတာ အိုး ဘှတျဘှတျဘှတျ… ဒုတျ…ဒဈဒဈဒဈ ပွှတျ.. အခနျးတှငျး၌ အသံပေါငျးစုံထှကျနကော ဖွညျးဖွညျးညှောငျ့လိုးလိုးလိုကျ အမွနျခပျစိပျစိပျ ဆောငျ့လိုးလိုကျနှငျ့.…သူ၏လီးကွီးအား…နောကျဆုံး အားနှငျ့ ဖိသှငျးလိုကျပွီး…သူ၏လရညျမြားအား ပနျးထညျ့လိုကျတယျ…အားးးအ…ကောငျးလိုကျတာ” ကမြလညျး ပူနှေးသော လရညျမြားစောကျပတျထဲ အရှိနျနှငျ့ပနျးဝငျလာသဖွငျ့ တကိုယျလုံးတဆတျဆတျတုနျပွီး…ပွီးဆုံးခွငျးသိုရောကျသှားတော့တယျ…သူလညျး ကမြကိုယျလုံးပျေါသို့ မှောကျခလြိုကျပွီး…ဖကျထားလိုကျလတေော့သညျ……ပွီးပါပွီ။
အချစ်ကမ္ဘာဝယ် အနှစ်တွေရှာမယ် (စ/ဆုံး)
နီလာရေ…နီလာ……. ဝေ့..နီလာ…အသံခပ်ကျယ်ကျယ်လေး..ကြားလိုက်ရမှ.. နီလာတျောက်…အတွေးနယ်ချဲ့နေရာမှ… အသိလေးဝင်လာခဲ့တော့သည်…….. ဟုတ်..ကိုကြီးစိုးမိုး…ဘာမှာမလို့လဲ… နင့်မလဲ…ဘာတေ.ငေးပီးဆွေးနေလဲ.. မသိတော့ပါဘူး..ခေါ်မကြား..အော်မကြားနဲ့….. ငါ.လဖက်သုတ်.တပွဲပေးဟာ. .ရေနွေးကြမ်းလေးပါပေးဦး..ဒီဟာတေက..အေးနေပီ… ဟဲ့ဟဲ့..ချဉ်ငံစပ်လေးနော်….သေချာလဲလုပ်ပေးဦး.. .တွေးရင်းငေးရင်းနဲ့..သုပ်လို့..ငါစားမရဖစ်နေပါဦးမယ်. ဟား…ဟား…ဟား… အာ…ကိုကြီးစိုးမိုး.. ကလဲ..အဲ့လိုလဲမဟုတ်ပါဘူး..၃မိနစ်စောင့်..ရှယ်သုပ်ပေးမယ်..ပုဇွန်ခြောက်လေးပါများများထည့်ပေးမယ်။
အဲ့ဒါကြောင်းလဲ..နင့်ဆီပဲ..လာလာဆွဲနေရတာပေါ့ဟယ်…..ဟုတ်ပါတယ်….နီလာ..ဆိုတာ..ကျမလေ… အသားခပ်ညိုညိုနဲ့..အရပ်အမောင်း.. အလယ်အလတ်လောက်နဲ့..မြင်သူ…ပြန်လှည့်ကြည့်ရလောက်စေတဲ့. ဘောဒီ..နဲ့..ရင်သားခပ်မို့မို့နဲ့..တင်သားခပ်တင်းတင်းတေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကျမ……ယောကျားရှိပေမဲ့….. ဗိုက်ခေါက်လေးနည်းနည်းထွက်နေတာကလွဲလို့.. .မြင်သူလိုးချင်စရာ….ဘောဒီ. မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကတော့..ဘုရားပေးတဲ့ဆုလာဘ်ပါပဲ..ကျမ.ယောကျားက….. ထွန်းဇော်..အရမ်းရိုးတယ်.. ကျမထက်..၂နှစ်ကြီးတယ်..အသက်က..၂၆..ကျမ..က.၂၄….ညားတာကတော့..၃နှစ်လောက်ရှိပီ.. သားသမီးတော့မယူဖစ်သေးဘူး….သူက..ဆိုင်ကယ်..တက်ဆီ .ဆွဲတယ်..ကျမကတော့.. လက်ဖုတ်သုတ်ဆိုင်လေးမှာ… အအေး..ကွမ်း..ရေသန့်..ဆိုင်သေးသေးလေးပေါ့.. တက်ဆီ .သမားတေ..ဂိတ်ထိုးတဲ့နေရာလေးဘေးမှာပေါ့…အရောင်းအဝယ်လေးလဲ.မဆိုးဘူးပေါ့။
တနေ့..ကျမ.ဘဝကို.တစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲစေတာကတော့…ကိုကိုကျော်…ဆိုတဲ့….ကျမရဲ့..ချစ်လင်ငယ်ပေါ့…. .ပြန်တွေးတိုင်း..ရင်ခုန်သံတေ..ဆူညံမြန်ဆန်စေတဲ့သူ… ကျမရဲ့..နှလုံးသားကို..စွဲကိုင်လုပ်နိူင်စွမ်းရှိတဲ့သူ…ကျမရဲ့..ဆန္ဒတေ..ပြည့်ပြည့်၀၀ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့သူ…ကျမ..သူ့ကို..အရမ်းချစ်တယ်…အရမ်းချစ်တယ်..ကိုကိုကျော်……. ကျော်ကြီး..တျောက်….တက်ဆီ .ပို့ပီးရာမှာ..ထိုးနေကြဂိတ်သို့..ပြန်ရောက်လာပီး……ကားတံခါးလေးဖွင့်၍. .ဆေးလိပ်တလိပ်အားမာန်ပါပါဖင့်ဖွာရှိုက်ရင်း… ဖုန်းလေးထုတ်ခါ.. ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဖင့်..ဆေးလိပ်တထိပ်..ကုန်သည်အထိ..သောက်လိုက်ပါတော့သည်….. အပြင်းပြေသုံးရန်..ဖွင့်ထားသော..ဆက်စ် အကောင့် လေးအား. စတင်၍..ကျော်ကြီးတျောက်..နှာကျောတင်းတော့မည်။
ကျနော့်..နာမည်…ကျော်ကျော်ဦး…အသက်ကတော့..အိုဗာ..ဗျ..၄၅.ရှိပီ ..အလုပ်ကိုင်ကတော့.. တက်ဆီ ..ဆွဲတယ်…မိန်းမလား..ရှိတယ်…ကလေး..၃ယောက်..နဲ့ …… အိမ်ထောင်သက်ကြာလာတော့…မိန်းမကို..ဘုချင်စိတ်က…အားမရ.. .ရောဂါသည်ဆိုတော့.. ဆီးချို.သွေးတိုးကရှိသေး…အဲ့လိုအဲ့လိုနဲ့ပေါ့…… ထားပါတော့.. ကျနော်.သုံးနေတဲ့..ဆက်စ် အကောင့် ထဲမှာ..ဆော်လေးတေနဲ့ အကြူ ဇယားလေးတေ..ခင်းထားတာတေရှိတယ်။
ဒါကတော့..စိတ်ပြေလက်ပျောက်..အာသာပြေပေါ့.. အဆင်ပြေရင်..ဗီဒရိုကော လေးနဲ့..သူဘက်ကလဲပွတ်…ကိုယ်ဘက်ကလဲ.ဂွင်းထုပြပေါ့…အဆင်ကိုပြေလို့ . ဒါနဲ့..မနေ့ညက..နီနီ .ဆိုတဲ့.. ဆော်လေးတပွေ..ကို..အပ် လိုက်တယ်…သူလက်ခံထားတာကို.. မသိဘူး..ကျနော်လဲ.နေ့လည်က.နည်းနည်း.ပန်းထားတော့. အိပ်ပျော်သွားတယ်…ခုမှ.သိရတာ… အဲ့လဲ့….သူလိုင်းပေါ်ရှိတယ်… အချိန်ရှိခိုက်.လုံးလလေးစိုက်လိုက်ဦးမှ…. ဟိုင်း….. (ဟိုင်း..ပါရှင့်) ဟုတ်ကဲ့..ခင်ချင်လို့ပါ..ဗျ (ဟုတ်.ရတာပေါ့..ရလို့..ညကတည်းက.လက်ခံထားတယ်လေ..အပိုတေက. ) ဟုတ်ကဲ့ပါ..ကျေးဇူး.. ဒါနဲ့..ဘာတေလုပ် (အလုပ်.လုပ်နေပါတယ်ရှင့်) စပ်စုတယ်မထင်နဲ့..ဘာအလုပ်လဲကွယ် (နီလာက..ဈေးရောင်းပါတယ်..ခုဈေးဆိုင်မှာပဲလေ) ဟုတ်လား..ဘယ်မှာနေ. (…မှာပါရှင့်) ဟုတ်လား.ဘယ်လမ်း.မှာလဲ.. (..တက်ဆီ ဂိတ်နားလေးမှာပါရှင့်) ဟုတ်လား..အဲ့ဂိတ်ကို..လာနေကြမဟုတော့.မသိဘူး..ရောက်တော့ရောက်ဖစ်တယ်.အမှတ်တမဲ့နဲ့မို့… လာလည်ခဲ့မယ်လေ… (ရပါတယ်..ရှင့်.)
နာမည်က..နီလာတဲ့လား.. အသက်ကရော (ဟုတ်ကဲ့..နီလာဝင်း.ပါရှင့် အသက်က.၂၄…အကိုကရော) ကျော်ကျော်ဦး..ကျော်ကြီးလို့ပဲခေါ်ကြတာများပါတယ်..အသက်ကတော့..ကြီးပီ… ၄၀.. (ဟုတ်လား…ခဏနော်..ဈေးဝယ်သူလာလို့..နောက်ပြန်ဆုံမယ်လေ.)… ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ….. ..နီးနီးလေးပဲ…သွားကြည့်လိုက်ဦးမှပဲ… တက်ဆီ ..အားလား.ဆရာကြီး…..ဟိုက်…ဒုက္ခပဲ… အားပါတယ်ဗျ..ဘယ်သွားမလို့လဲ…တင်တက်..ကားပေါ်.. ကားတံခါးအားဆင်းဖွင့်ပေးလိုက်ရတာပေါ့….(…..သွားချင်လို့ဗျာ..)ရပါတယ်..မြို့ပြင်ဆိုတော့…(….လောက်တော့ပေးဗျာ..နော့…) နည်းနည်းလောက်လျော့ပါဦးဗျာ….၅၀၀ တော့လျော့ပေးမယ်ဗျာ.. အများကြီးလဲမဆစ်ပါနဲ့နော်.. ကုန်ဈေးနှူန်းကလဲကြီး..ဆီဈေးကလဲတက်နဲ့မို့ပါ။
အိုကေ ..ပါဗျ..သွားကြတာပေါ့….. နီလာ..တျောက်…ညနေစောင်းလို့.ဆိုင်လေးသိမ်းပီး.. .ပြန်ဖို့..လင်တော်မောင်..ထွန်းဇော်ကို..စောင့်နေရင်း… လိုင်းလေးဖွင့်ပီးသုံးနေတော့သည်…. နေ့ခင်းက..စကားပြောခဲ့သော..ကိုကျော်ကြီးဆိုသူ.. ဝေါ ထဲဝင်ကြည့်မိရာ..အောစာများ..ရှယ်ထားတာတွေ.. ကို..တွေ့မိ၍…စောင့်ရင်းဖတ်လိုက်မိတော့သည်… အိုး…အရမ်းကောင်းတာပဲ….. ဖတ်ရင်းနဲ့ငါစိတ်တေတောင်..ဘယ်လိုတေဖစ်နေလဲ.မသိတော့ဘူး. .ပေါင်ကြားလဲ.ယားစိစိ.ဖစ်လာတယ်….. .စိတ်ဆန္ဒပြည့်ပြည့်၀၀မရတာကလဲ.ကြာပါပီ… ငထွန်းက..ထင်သလောက်မဟုတ်… ထမိန်လှန်တင်..တက်လိုးပီး.. ၅မိနစ်လောက်ဆိုပီးရော..လီးကလဲသေးသေးလေး.. ၄လက်မခွဲလောက်….ခုလဲ.စာဖတ်ရင်း..စိတ်က.ထလာပီ.. .တော်ပီ ..တော်ပီ ..ညမှပဲဆက်ဖတ်တော့မယ်.. လိုင်းလေးပီတ်ပီး..ထမီလေးပြန်ပြင်ဝတ်ရသည်။
ဖီး လာပီး.အရည်စိမ့်ထွက်လာတာ…တော်သေးတယ်..အမဲရောင်.ဖိစကတ်လေးဝတ်ခဲ့မိလို့.. .ပြောရဦးမယ်..နီလာက..ထမီသိပ်ဝတ်လေ့ဝတ်ထမရှိဘူး..ဖိစကတ်လေးတေပဲဝတ်တာများတယ်… ဒီနေ့မှ..ဝတ်စရာတေမီးပုမတိုက်ရသေးလို့..ထမီဝတ်လာခဲ့တာ…တော်သေးလို့……. ဟော..လင်တော်မောင်..ဆိုင်ကယ်ရောက်လာပါပီ .. စောင့်နေတာကြာပီလား..မိန်းမ…(အင်း..နာရီဝက်လောက်ရှိပီ.ကိုထွန်း…)..အင်း..ပြန်ကြတာပေါ့… ကျော်ကြီး…နီလာဆိုင်..မသွားဖစ်လိုက်၍..အိမ်သို့သာ..ပြန်ခဲ့လိုက်တော့သည်။
မိန်းမ.ရေ…မိန်းမ.. ဝေ့..ငါအိမ်ထဲ၇ှိတယ်..ဘာလို့ဒီလောက်.အော်နေရလဲ.. တကတည်းထွက်ပြေးမဲ့သူကြနေတာပဲ .အော်ကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့..ရေမိုးချိုးတော့..ထမင်းစားမယ် အိမ်ရောက်၍.ရေမိုးချိုး..ထမင်းစားပီး..အသီးသီး..အိပ် ယာဝင်ကြတာပေါ့… ငထွန်းတို့တော့.ဟောက်နေပီ ..အိပ် ရင်လဲ..သေနေတဲ့အတိုင်းပဲ.ဆင်အော်တောင်.မနိူးဘူး….. ကျမ..ကို..လိုးပေးရကောင်းမှန်းလဲ.မသိဘူး.. ဒီမှာတော့..လိုးခံချင်နေတာ..သူကတော့မသိရှာ…. လိုင်းသုံးတာပဲ..ကောင်းပါတယ်….. ထမင်းစားပီ ၍..ဆေးလိပ်လေးသောက်ရင်း..မိန်းမ.ကိုကြည့်လိုက်ရာ.. အိပ် နေပါပီ…ကလေးတေလဲ..သူ့အခန်းနဲ့သူ..အိပ် ကြပီ ..နာရီကြည့်တော့.. ၉.နာရီခွဲနေပီ…နီလာ့ကို..သတိရ၍..စာပို့ရန်..အားသွင်းထားသော..ဖုန်းဆီသို့..အာရုံပြောင်းလိုက်တော့သည်။
ဟိုင်း…နီလေး ရှင်..ကိုကျော်… မအိပ် သေးဘူးလား..နီလေး ဟုတ်..မအိပ် ချင်သေးလို့..ဟို့ကည့်ဒီကြည့်နဲ့.. ကိုကျော်ရော.မအိပ် သေးဘူးလား အင်း .ခုမှတက်ခဲ့တာ..မအိပ် သေးဘူး….နီလေး ဟုတ်..ပျင်းတာနဲ့…ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်နေတာ. အာ့ဆို.စကားပြောမယ်လေ..ရလား.. ခဏ.ကိုကျော်..ဘေးမှာ..အမျိုးသားရှိတယ်.. အိမ်ထောင်နဲ့လား..နီလေးက.. အင်း ..ဟုတ်တယ်.ကိုကျော်…ဘာလဲ.. အိမ်ထောင်နဲ့ဆိုလို့..စကားမပြောချင်တော့လို့လား.ရပါတယ်နော်. အာမဟုတ်ပါဘူး…အိမ်ထောင်နဲ့ဆိုတော့လဲ.. ပိုကောင်းတာပေါ့. ဟီးဟီး…. ကိုကျော်နော်…ဘာပိုကောင်းတာလဲ…. မဟုတ်ပါဘူး..ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းစကားပြောလို့ရတာပေါ့… အဲ့ဒါပြောတာ… အင်း ..ကိုကျော်လဲ.အိမ်ထောင်ရှိလား.. ကိုကျော်..မညာပါဘူး..ရှိတယ်.. ဒါမဲ့..ငတ်နေတာ.ကြာပါပီ.နီလေးရယ်…အားမပါဘူး.. မိန်းမက..ရောဂါသည်.ဆိုတော့..အမောလဲ.မခံနိူင်… .ဘေးစောင်းလေး..ကပ်တွန်းလေးတွန်းနေရတာ.. နီလဲ..အမှန်တိုင်းပြောရရင်… သန်တုန်းမြန်တုန်း..ကို.ရထားပေမဲ့…အမျိုးသားက..၇ ရက်တခါလောက်မှသာ…. ဆန္ဒမပြည့်ပါဘူး..ကိုကျော်.. နီလေး..ကိုကျော်.ပုံပို့လိုက်မယ်နော်။
နီလေးလဲ..ကိုကျော်ပို့သလိုပို့ပေးမလား ဟုတ်.ကိုကျော်.. အဲ့မှာ.ပို့လိုက်ပီတွေ့လား… တွေ့တယ်.ကိုကျော်..မထင်ရဘူးနော်…၄၅.. အရမ်းနုတယ်..မသိရင်.၃၅.လောက်ပဲထင်ရတယ်.. နီလေး.ပို့ပေးလေ.မြင်ချင်လှပီ .နီလေးကို တွေ့လား.ကိုကျော်… နီလေးရေ..ကိုကျော်တော့ကြွေပီ ကွာ… ချစ်စရာလေး..နီလေးက…အရမ်းလှတယ်…. မြှောက်ပြောနေပြန်ပါပီ..ဘာစားချင်လို့လဲ..ဝယ်ေ့ကြွးပါမယ်နော်… တကယ်ေ့ကြွးမှာလား.. တကယ်ပြောတာ..ပြော နီလေးကိုပဲစားချင်တာ.. တွေ့လား..နီလေးပုံမြင်ပီး..ကိုကျော့်..ညီလေး..တင်းလာပီ.. လီးပုံအား..နီလေးထံသို့ရိုက်၍.ပို့ပေးလိုက်သည်။
နီလေး..ပုံကိုမြင်၍..စပတေ..ယားသွားတော့သည်…ဒါကြီးနဲ့သာ.ခံရရင်တော့.. အရှင်လတ်လတ်.နတ်ပြည်သို့ရောက်သွားနိူင်သည်….. ၈လက်မလောက်ရှည်ပီး… ကျွဲစိမ်း.ပုလင်းလုံးလောက်ရှိလေသည်… အာ…ကိုကျော်..ဘာတေပို့နေတာလဲ..ရှက်စရာကြီး. နီလေး..ပုံပို့ပေးလေ.. ကလောင်…..ပို့ပါပီ မြင်လိုက်ရတော့..ပို့၍လီးက.တောင်သွားတော့သည်… မုန့်ဖောင်းလေးလိုပဲ..ဖောင်းတင်းနေရော. .နှူတ်ခမ်းသားလေးတေ.. နဲ့နဲ့ညိုနေတာက.လွဲလို့..ပစ်ရက်စရာမရှိ….. ကုန်းမှုတ်ချင်စရာ..ကောင်းအောင်..လှသည်… လိုးချင်စိတ်တေ.ဆိုတာ..ထိန်းမရ… ပုံကြည့်၍..ဂွင်းထုနေမိတော့သည်. နီလေး..ကိုယ်တို့.အပြင်မှာ..ဆုံကြမလား.. နီက.ဆိုင်တဖက်နဲ့ဆိုတော့..အားမှာမဟုတ်ဘူး..ကိုကျော်ရဲ့.. ဒါဆို..ဂိတ်လာထိုးမယ်..နီ.တို့.ဆိုင်ဘေးမှာ.. အင်း .ရတယ်လေ.. နီ ဖုန်းနံပာတ် ပေးပါလား. ဟုတ်… ၀၉…. ၀၉…..အဲ့ဒါ.ကိုကျော့်.ဖုန်း.. ဟုတ်…ကိုကျော်..နီလေး..အိပ် တော့မယ်..မနက်လဲအစောကြီးထရဦးမှာမို့…. ကောင်းပါပီ ..နီ..အရမ်းတေ ချစ်မိနေပီ ..မနက်တွေ့မယ်နော်.. ဟုတ်..ကိုကျော်..မဆိုးနဲ့နော်..တွေ့ရင်..ခိခိ…. အင်း .ပါ..နီ..ဂွတ်နိုက်။
ကျော်ကြီး..ဝမ်းသာမှူတေများစွာနဲ့..အိပ်စက်အနားယူရင်း.မနက်အတွက်..ရင်တေခုန်..နေရပါတော့တယ် နံနက်စောစော…မှာ..ဆိုင်ခင်းရင်းနဲ့..အလုပ်နည်းနည်းရှူပ်နေချိန်…ဖုန်း.သံလေးကြားလိုက်ရ၍.. ယူကြည့်မိလိုက်ရာ…… ကိုကျော်ကြီး..ပါလား… ဟယ်လို နီ..ကိုကျော်..ပါ..နီတို့ဂိတ်နားကို.လာနေတာ.. ဟုတ်ကိုကျော်..ဘာစားပြီးပီလဲ..ဆိုင်ကိုလာခဲ့..လက် ဖက်ရည်တိုက်မယ်…. လက်ဖက်ရည်ပဲလား မုန့်ပါ.သေးတယ်… ခိခိ.. ဒါနဲ့ပြောရဦးမယ်..နေ့ခင်းသွားစရာရှိတယ်.. အဲ့ဒါ..ကိုကျော်.ကားနဲ့သွားမယ်လေ..ရမလား… တကယ်လား..ရတာပေါ့..နီနဲ့ဆို.. နတ်ပြည်လဲသွားနိူင်သလို..ငရဲကိုလဲသွားရဲတယ်.. ဟုတ်ကိုကျော်..လာခဲ့လေနော်. ကိုကျော်…မျှော်နေမိတဲ့ကျမ…ညကတည်းက..စိတ်တွေက..ယိုင်ချင်ချင်…နေ့လည်ကြ.. ကိုကျော်နဲ့အပြင်သွားရတော့မယ်ဆိုတော့.. ဘာတွေဆက်ဖစ်မလဲ…. စိတ်ထဲ..တွေးရင်း..စောက်ရည်တောင်.နည်းနည်းစိမ့်လို့လာတယ်။
ကျော်ကြီး..ရေ..တက်ဆီ ..အားလားကွ…. ရတယ်လေ..အကို..ဘယ်သွားမလို့လဲ…. အေးကွာ..ငါကိစ္စလေးရှိလို့ဟ.(….)ကိုသွားမလို့…. ရတယ်လေ..အကို..တက်..သွားကြတာပေါ့… ကျော်ကြီး..တျောက်တော့..လက်ကီးဒေးး .ပဲ.ဒီနေ့ကတော့…မနက်ကတည်းက..ရလိုက်တဲ့. လမ်းကြောင်းတေ…ခုလဲ..၁၂နာရီ.ကျော်နေပီ.. ခုထိနီလေးဆိုင်ဆီမရောက်သေး.. ချိန်းထားတာက.. ၁နာရီ…မှီကောင်းမယ်..ထင်ပါရဲ့..ကားတေမကျပ်ပါစေနဲ့ပဲ..ဆုတောင်းနေရတာ. .ကျော်ကြီးတျောက်..ရင်ထဲမွန်းကျပ်လို့..လေပူတေက်ုမှူတ်ထုပ်ရင်း..ကားလေးကို..မောင်းနှင်လာရာ…… ငါ့ကောင်ကျော်ကြီး..ဘာတေ..စဉ်းစားပီး..သက်ပြင်းကြီးပဲချနေတော့တယ်…
သီချင်းဖွင့်ကွာ……ငါပျင်းတယ်ဟ…. ဟုတ်..အကို..ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး.. ဟိုစဉ်းစား.ဒီစဉ်းစားနဲ့ပါ…ဒါနဲ့.ဘာသီချင်းနားထောင်မလဲ….. စိုင်းထီးဆိုင်..ပဲဖွင့်ကွာ…အေးအေးလေးနဲ့ပေါ့…. ဟုတ်အကို…ရတယ်..ကျနော်လဲ..အရမ်းကြိုက်… ထီးဆိုင်.ကြီးကို…. ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့..ဖုန်း .လေးထုတ်..ဘလူးတူ..လေး.ချိတ်ပီး.. ချစ်သူလမ်းကြားလေးကနေ..စလိုက်တာ… သံစဉ်နောက်မျောပါရင်း.. .ကျော်ကြီးရဲ့..အတွေးထဲ..နီလေးရဲ့..ပုံရိပ်တေ..စိုးမိုးလို့လာပါတော့တယ်။
မမနီလာ…ဘယ်သူ့မျှော်နေတာလဲ…. မေးသံအကြား..သူခိုးလူမိသလို..မလုံမလဲနဲ့…… အော်..မဟုတ်ပါဘူး..ငါဒီနေ့အပြင်ကိစ္စလေးရှိလို့..အဲ့ဒါ…သွားရင်ကောင်းမလား..စဉ်းစားနေတာ… ဂိတ်မှာလဲ..ကားတေကမရှိတော့… .စောင့်နေတာ….. ဝူး…..သက်ပြင်းလေး.ခိုးချရပြန်ပီ .. ကျွီ….ကားလေးရပ်လာပါပီ…. ဘယ်သူပါလိမ့်…မှန်တံခါးလေး..ကျလာတော့…..ဟောတော့..ကိုယ်တော်ချော. .ရောက်လို့လာပါပီ…ကိုကိုကျော်…. ညီမလေး..မမ..အပြင်ခဏသွားဦးမယ်နော်..ဆိုင်ခဏကြည့်ထားပေးဦး… ဟုတ်..မမနီလာ…. အေး..အေး..သွားမယ်နော်… .လက်စွဲအိတ်လေးယူရင်း…. ကားဆီသို့..လှမ်းလာနေသော… ကျမ..ကို..ဝါးစားမတက်ကြည့်နေတဲ့..ကိုကိုကျော်ရဲ့.. အကြည့်တေက.. ကျမရဲ့…နှလုံးသား.ထဲ..အအေးလိုင်းဖြတ်သွားသလို…အေးစက်..သွားရတယ်။
ကားလေးတရိပ်ရိပ်နဲ့..မောင်းနေစဉ်…တိတ်ဆိတ်မှု့ကို..ဖြိုခွင်းခဲ့တာ..ကိုကိုကျော်…. နီလေး…ဘယ်သွားမလဲ….. ကျမ…လန့်သွားရပါတယ်…အပြင်က.အသံက.. ပို၍..တည်ကြည်ပြတ်သားလှပါတယ်…. ကိုကိုကျော်..ဘယ်သွားချင်လဲ….. အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောရအောင်.. ပန်းခြံပဲ..သွားလိုက်မယ်လေ..မကောင်းဘူးလား… ဟုတ်.ကိုကိုကျော်….. ပန်းခြံထဲ..ဝင်၍…ကားပါကင်..တွင်..ကားအပ်.. လတ်မှတ်လေးကိုယ်စီဖင့်..ဝင်လာခဲ့ရာ..လမ်းတလျှောက်….. အတွဲလေးတွေ..ကိုယ်စီ.. ထီးလေးကိုယ်စီဖင့်… အလုပ်ဖစ်၍နေကြရာဝယ်………. ကိုကိုကျော်ကဖြင့်..ပြုံးစိစိ…. နီလေး…ဘာစားပီ ပီ လဲ… မစားချင်သေးဘူးကိုကျော်…ရင်ကယ်နေလို့… စကားတေ..ဟိုပြော.ဒီပြောဖင့်…. .ပြောနေကြရင်း..လက်လေးအရင်.လာကိုင်တာက..ကိုကျော်… ကျမ..ရင်ထဲ..ကုလားဘုရားပွဲ..လှည့်သလို..ဆူညံလို့နေပါပီ။
လက်ဖျားတေအေးစက်လို့..အပျိုလေးသဖွယ်..ရှ က်သွေးတေကြွယ်လို့. .ခေါင်းလေးကို.ငုံ့၍..ဟန်ဆောင်..ရုန်းလေးရုန်းနေရသည်မှာ..လဲ..ပင်ပန်းလှပီ….ညကမြင်ထားရသည့်… ကိုကိုကျော့်..လီးကြီးကို…မြင်ယောင်တမ်းတရင်း…ခံချင်မိတဲ့..စိတ်တေကလဲ..တားမရ..စီးမနိူင်….. ကိုကိုကျော်..တဆင့်..တက်လာပါပီ…ကျမရဲ့..နို့တေ..ကို..ညှစ်..နေပါပီ….ကျမလေ…မနေနိူင်တော့ဘူး…… ကိုကိုကျော်….အား….အ…..နီ.မရတော့ဘူး..မနေနိူင်တော့ဘူးကွာ.. အဲ့လိုကြီး..မကြမ်းပါနဲ့..တခြားသူတေ..မြင်ကုန်ပါဦးမယ်…… မြင်မြင်..နီလေးရယ်… ကိုကျော်..နီလေးကို..ဆန္ဒတေဖြည့်ဆည်းပေးချင်နေပီ..ဒီမှာကိုင်ကြည့်ဦး…. ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်..ကျမ.လက်ကိုကိုင်၍..သူ့၏.. ၈လက်မ.လောက်ရှိတဲ့လီးကြီးပေါ်ကိုနေရာပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
အမလေး….. ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လေးနဲ့..လန့်ပြလိုက်ပါတယ်… ဒါကို..ကိုကိုကျော်က..အသဲယားပီး…ကျမနူတ်ခမ်းကို..ဖက်နမ်းပါတော့တယ်….. နို့တေလဲ..ညှစ်…ကျမ..အရမ်းကို.သာယာနေပီ.. ခံမနိူင်တော့ဘူး..အလိုးခံချင်နေပါပီ……. ..ကိုကိုကျော်..နမ်းနေရာမှ..ရုတ်တရက်…ကျမ.လည်ဂုတ်ကို..ဆွဲကိုင်ပီး..သူ့ရဲ့.လီးကြီးဆီသို့… ပါးစပ်နေရာပေးလိုက်ပါတော့တယ်… ကျမလဲ.အိမ်ထောင်သည်ပဲလေ..သိတာပေါ့…. အား….ကောင်းလိုက်တာ..နီလေးရယ်… ဘယ်လိုတေတောင်…ကျွမ်းနေတာလဲ……. အား…..အရမ်းကောင်းတယ်..နီလေး… ကိုကျော်မှာသာ..အရမ်းကောင်းပီ ..နတ်ပြည်ရောက်နေတာ.. ကျမ..မှာတော့…၈လက်မလောက်အရှည်နဲ့ ကျွဲစိမ်းပုလင်းလောက်အလုံးကို… မဆံ့မပြဲ..စုပ်ပေးနေရတာ… ကသိကအောင့်ဖစ်ပေမဲ့..ပေါင်ကြားက..စပလေးကတော့..အဲ့ဒီလီးဝင်တာခံချင်နေမိပီ။
ရုတ်တရက်..ဆွဲဆောင့်ပီး..ပါးစပ်ထဲက..လီးကို.ဆွဲထုတ်ပီး…. ကိုယ်ကို.တပတ်ဆွဲလှည့်လိုက်ပီး..ခါးကနေ.ဆွဲကိုင်၍..ဖိစကတ်.လေးကို.. မတင်..ပင်တီလေးကို.ဆွဲချွတ်..အ…..အ… အော်ချိန်တောင်မရလိုက်..တားချိန်မရလိုက်…. .သားအိမ်လာထောက်နေတဲ့….ကိုကျော်ရဲ့လီးက…. ကျမစောက်ဖုတ်ထဲ.. .နေရာယူလို့..ပြည့်ပြည့်ကျပ်ကျပ်..နဲ့…လည်ပင်းထဲ..ငှက်ပျောသီး နင်နေသလို..တစ်စို့စိုနဲ့ရှင်…….အရမ်းကောင်းတယ်……အား…အား..ကိုကိုကျော်…… ခါးကနေ..ကိုင်ပီး..အချက်၅၀လောက်မရပ်မနား..လိုးဆောင့်ပစ်ပီး….ဆွဲ..ထုပ်…ပီး….. ကိုကျော်..ပြောလာသည်မှာက…. နီလေး…ကိုကျော်တို့..တည်းခိုခန်းသွားကြမလား.. ဒီမှာက.မလွပ်လပ်ဘူး….နော်….တဲ့ ခေါင်းလေး.ငုံ့၍…တလုံးတည်းအဖြေပေးလိုက်ပါတယ်….. (အင်း) ပန်းခြံထဲက..ကားလေးမောင်းထွက်လာပီး.. အနီးဆုံး..တည်းခိုဆောင်.. သို့…မောင်နှင်လာပီး…အခန်း..ယူ..အချိန်…၅နာရီယူ…. အခန်းသို့..ဝင်လာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။
အခန်းထဲသို့..ရောက်တယ်..ဆိုရင်ပဲ…… ကျမ..ကို..ဆွဲ.လှဲပီး..အဝတ်မစားတေ..ဆွဲဖြဲပစ်ပါတော့တယ်… ကျမကြောက်ရမလား..ထွက်ပဲပြေးရမလား..တောင်းပန်ရမလား…ချွေးတေပင်စီးးကျလာပီး…. ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ….ခက်တာက…အဲ့လို.. ခပ်ကြမ်းကြမ်းအပြုအမူတေကိုပဲ… ကျမ..နှစ်သက်သလို..ခံစားနေရပါတယ်…ဟုတ်ပါတယ်…စပ..ထဲက.. အရည်တေပင်..တော်တော်.စိုနေပီလေ…သူ့ကိုတော့..ညာလို့မရဘူးဆိုတာ..မိန်းကလေးတိုင်း..သိပါတယ်နော့…. ပါးစပ်က..ဘယ်လောက်ငြင်းငြင်း…စပ.လေးထဲက.စီးကျလာတဲ့..စောက်ရည်တေက..သက်သေပဲလေ……. ဘာပဲဖစ်ဖစ်..လိုးလာမဲ့..လီးကိုပဲ..မှော်လင့်နေရတယ်…ကျမ..အရမ်းအလိုးခံချင်နေပါပီ……. ကိုကျော်….ဖြဲပစ်လိုက်လို့အဝတ်စားတေလဲ…ရစရာမရှိတော့….. ကိုယ်ပေါ်မှာလဲ..မိမွေးအတိုင်း..ဘာဆို.ဘာမှမရှိတော့။
ဒါကို..ကိုကျော်က..ကြည့်၍…… စိန်တုံးတတုံးကို..လိုချင်တက်မက်သော..အကြည့်မျိုးဖင့်.. ကျမ..စပ..လေးကို.စားမတက်ဝါးမတက်ကြည့်ပီး… သူ့အဝတ်စားတေကို..ဆွဲချွတ်လိုက်ပီး… ၈လက်မလောက်ရှိတဲ့.. လီးကြီးက..အပြင်သို့….ထွက်လာပီး..ချိန်သီးသဖွယ်.. ဟိုရမ်း.ဒီရမ်းနဲ့..အသည်းယားစရာ….. ကိုကျော်….ကျမ.ပေါင်ကြားထဲ..နေရာ.ယူလိုက်ပီ.. .စောက်ရည်တေ.ရွှဲနေတဲ့..စပကြီး..တပြင်လုံးကို.. လျှာကြီးဖင့်..ယက်ချလိုက်..သည်မှာ.. အသည်းအေးစရာ…စောက်စိလဲ..တောင်ပီး..တင်းသွားပီ….ဒါကို..သိတဲ့..ကိုကျော်က… တင်းနေတဲ့စောက်စိကို.ဆွဲစုပ်လိုက်ပိး..ပါးစပ်ထဲ..ငုံ.ထားလိုက်သည်။
ဒါနဲ့မရပ်သေး…ငုံထားတဲ့စောက်စိလေးကို….အထဲမှာ လျှာဖျားလေးနဲ့..ကလိပေးနေတာလေ.. ကျမဖင့်…အရာရာ.အားလုံးကိုမေ့ပီး.. .လေဟာနယ်ထဲရောက်နေသလို…… ကိုကျော်ခေါင်းကြီးကို..ဆွဲဆွဲဖိထားပီး.. ကြားလေသွေးမှာကိုပင်..မခံနိူင်……. ဒါကို.သိနေသော..ကိုကိုကျော်ကလဲ…စပ..တပြင်လုံးအားနေရာမလပ်.. တာဝန်ယူ…ယက်လိုက်..အစိဆွဲစုပ်လိုက်…. ထွက်ကျလာတဲ့စောက်ရည်တေကိုလဲ…. လိုက်ယက်……တချက်..တချက်..စအိုဝကိုပါ.. လျှာဖျားနဲ့..လှမ်းလှမ်းထိုးကလော်..ပေးရင်… အသည်းကို..လာလာခလုတ်တိုက်သလိုပါပဲလား…..
မှုတ်နေရာမှ..ရပ်၍…ကိုကျော်. .တျောက်..သူ့လီးကြီးကို..ကိုင်၍…နီလေး၏…စပ.ဝဆီသို့…တေ့အပြီး.. .ပေါင်၂ချောင်းကို.. ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုင်ကာ… အားကုန်..ဆောင့်လိုးလိုက်ရာ……အား…အား……အား……အင်း……ဗျစ်..အီးးရှီးး အမလေး ကောင်းလိုက်တာ အိုး ဘွတ်ဘွတ်ဘွတ်… ဒုတ်…ဒစ်ဒစ်ဒစ် ပြွတ်.. အခန်းတွင်း၌ အသံပေါင်းစုံထွက်နေကာ ဖြည်းဖြည်းညှောင့်လိုးလိုးလိုက် အမြန်ခပ်စိပ်စိပ် ဆောင့်လိုးလိုက်နှင့်.…သူ၏လီးကြီးအား…နောက်ဆုံး အားနှင့် ဖိသွင်းလိုက်ပြီး…သူ၏လရည်များအား ပန်းထည့်လိုက်တယ်…အားးးအ…ကောင်းလိုက်တာ” ကျမလည်း ပူနွေးသော လရည်များစောက်ပတ်ထဲ အရှိန်နှင့်ပန်းဝင်လာသဖြင့် တကိုယ်လုံးတဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး…ပြီးဆုံးခြင်းသိုရောက်သွားတော့တယ်…သူလည်း ကျမကိုယ်လုံးပေါ်သို့ မှောက်ချလိုက်ပြီး…ဖက်ထားလိုက်လေတော့သည်……ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အခဈြကမ်ဘာဝယျ အနှဈတှရှောမယျ
ယောက်ခထီး နှငျ့ ရှယျခြှေးမ